७७ डिएसपीहरूको सरुवा (को कहाँ पुगे ?) | NepalDut
७७ डिएसपीहरूको सरुवा (को कहाँ पुगे ?)
प्रहरी प्रधान कार्यालयले मंगलबार ७७ जना प्रहरी नायव उपरीक्षक डिएसपीको सरुवा गरेको छ । सरुवामा डीएसपीका लागि काठमाडौं उपत्यकापछि अति आकर्षक मानिने रसुवामा इन्द्रप्रसाद सुवेदीले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
इन्चार्ज पाउने डीएसपीहरुमा किरणजङ्ग कुँवर म्याग्दी, रन्जन दाहाल महानगरीय प्रहरी बृत्त दरबारमार्ग, सुनिलजङ्ग शाह महानगरीय प्रहरी बृत्त जनसेवा छन् ।
त्यस्तै किशोर श्रेष्ठ जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोट, कुलदीप चन्द इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर, ठगबहादुर केसी पश्चिम रुकुम, वसन्त पाठक रामेछाप, मुकुन्द रिजाल बिर्तामोड, मेखबहादुर कुवर मनाङ, रबिन कार्की टाँडी इलाका प्रहरी कार्यालय, राजन चापागाई बर्दिबास, हेमबहादुर शाही इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर छन् ।
आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले गरेको खटाएको ठाउँमा नजाने डीएसपी हेमबहादुर शाहीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरबाट चन्द्रनिगाहापुरमा सरुवा गरेका छन्।
कार्यालय प्रमुखबाट कार्यालय प्रमुखमा सरुवा नगर्ने नीति विपरीत शाहीको सरुवा गर्न आइजीपी खनाल किन बाध्य भए रु कुन शक्तिको दबाबमा उनले सरुवा गरेको ठाउँमा जान अटेर गर्ने शाहीलाई इन्चार्जबाट इन्चार्जमा सरुवा गरे रु यो चर्चा प्रहरी अधिकृतहरुबीच हुने गरेको छ ।
शाहीलाई आइजीपी खनालले २०७६ मंसिर २५ मा कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयमा विवादमा परेपछि सुर्खेत गणमा सरुवा गरेका थिए । तर उनी अटेर गर्दै कोहलपुरमै कार्यरत थिए । गएको दशैंमा डीएसपी शाहीले स्थानीय ठेकेदारसँग खसी मागेको भिडियो नै सार्वजनिक भएको थियो ।
खसीकाण्ड लगत्तै स्थानीय विद्यार्थी प्रकृति चन्दलाई ट्रकले ठक्कर दिएपछि उत्पन्न परिस्थितिमा कोहलपुर प्रहरीले विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थीमाथि निर्मम लाठीचार्ज गरेपछि उनलाई २०७६ मंसिर २५ मा उनलाई सुर्खेत गणमा पठाइएको थियो । र, डिएसपी कुलदीप चन्दलाई कोहलपुर इप्रका प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर,शाहीले आइजीपी खनालले गरेको सरुवा अटेर गर्दैआएका थिए । तिनै अटेरी डीएसपी शाहीलाई उनले अहिले इन्चार्जबाट इन्चार्जमै सरुवा गरेका छन् ।
२०७६ मंसिर २० मा २७ डीएसपीको सरुवा गर्दा बाजुराका उद्धवसिंह भाटको नाम जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा थियो । उनको ठाउँमा टंकप्रसाद भट्टराईलाई पठाएको थियो । तर भाट पनि सरुवालाई चुनौती दिंदै धनुषा गएका थिएनन् । उनको ठाउँमा सरुवा गरिएका डीएसपी भट्टराई बाटाबाटै फर्किन बाध्य भएका थिए ।
मंगलबारको सरुवामा भाटलाई अपराध अनुसन्धान महाशाखा टेकूमा ल्याइएको छ । भाटले यसअघि धनुषामा भएको सरुवा बदर गराउन सफल भएका छन् । धनुषाको ट्वाइसी भन्दा महाशाखा आकर्षक मानिन्छ । आइजीपी खनाल भाटका सामु पनि गलेर उनको सरुवा महाशाखामा गरेको सन्देश गएको छ ।
आइजीपीलाई निरीह बनाएर यसअघि चितवनका एसपी दानबहादुर मल्लको सरुवा पनि बदर भएको थियो ।
यस्तो छ सरुवा भएका डीएसपीहरुको विवरण